Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Tanguy Ndombele Carruurnimada Sheeko Xaqiiqooyin Wacan Lahaa
Tanguy Ndombele Carruurnimada Sheeko Xaqiiqooyin Wacan Lahaa. Deyn u ah TheSun iyo Stadito
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta Genius sida ugu nasiibka loo yaqaan "Awooda Guriga". Our Tanguy Ndombele Cartheel Yoonis iyo darajo Biinta Warqaduhu waxay kuu keenaan xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Tanguy Ndombele Sheekada Carruurnimada - Falanqaynta
Haa, qof walba waa ogyahay in xiddiga reer France uu yahay mid cajiib ah oo si wacan loola wareegay (daafaca iyo daafaca) waana mid ka mid ah ciyaartoyda khadka dhexe ee ugu fiican kubada cagta adduunka. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal kubada cagta ah oo kaliya ayaa tixgelinaya Tanguy Ndombele's Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Hore iyo Taariikhda Qoyska
Tanguy Ndombele wuxuu ku dhashay maalinta 28th ee bisha December 1996 waalidiintiisa ee Longjumeau, France. Wuxuu ku dhashay waalidiinta Afrikaanka ah ee ka soo guda jira DR Congo ee Bartamaha Afrika ilaa Faransiiska iyagoo raadinaya nolol wanaagsan iyo mustaqbalka carruurtooda.
Horumarinta Longjumeau, Tanguy Ndombele wuxuu ahaa caruur aad u qarsoodi ah, mid aan jeclayn inuu la hadlo qof walba. Qaar ka mid ah dadka ku ogaa inuu dib u soo laabanayo ee Longjumeau waxay dareemeen waxoogaa qabow ku saabsan dabeecada uu u soo bandhigay iyaga.
Tanguy Ndombele Sheekada Nolosha Hore
Si kastaba ha noqotee, sida Tanguy koray, arrimuhu waxay bilaabeen inay isbeddelaan si ay ugu mahadceliyaan hal shay.
Ma jiro wax aan ka ahayn jacaylkiisa iyo xushmadkiisa "Soccer". Danta iyo ka qaybqaadashada kubada cagta ayaa noqday ilo aan ka fogeyn xaqiiqooyinka murugsan.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Xubin kasta oo ka mid ah qoyska Tanguy Ndombele ayaa ku faraxsanaa inuu arko isaga inuu helo jacaylka kubada cagta, go'aanka isaga oo ka fogeynaya doorashooyin khaldan oo uu sameyn karo ilmo.
Da'da 5, Tanguy Ndombele ayaa durbaba sameeyay riyadii iyo hamigii nolosha ee ahaa inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah. Waxa uu awooday inuu waalidkiisa ku qanciyo baahida loo qabo in uu ka qayb qaato waxbarashada kubada cagta. Sida laga soo xigtay ilo;
"Ndombele wuxuu ku adkeysanayaa inuu noqonayo ciyaaryahan kubada cagta ah ama wax kale".
Si uu u xajisto dareenkiisa iyo awoodiisa inuu shaqeeyo, wuxuu go'aansaday inuu ka qeyb galo tijaabooyinka kubada cagta.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Nolosha Mudnaanta Hore
In 2002 da'da 6, Ndombele ayaa udub dhexaad u ah kubadda cagta wuxuu arkay isaga oo tijaabinayay isla markaana la qorey naadiga deegaanka, Epinay-sous-Sénart oo ku yaalla xaafadaha Paris.
Nabadgalyada Nolosha Nolosha Carruurnimada Hore. Ku darso Stadito
Ka dib seddex sanno oo uu la joogay kooxda markii uu da 'yahay 12, Ndombele ayaa ogolaaday inuu u dhaqaaqo FC d'Épinay Athletico oo ku yaal 2005 halkaas oo uu ku qaatay afar sano oo dheeraad ah.
Burburinta akadeemiyadda weyn ee akadeemiyadda ayaa horseeday go'aankiisii ​​ahaa inuu u wareego kuna biiro ESA Linas-Montléry, oo ah naadi ku dhow guriga gurigiisa iyo xaafadda uu ku soo koray. Ndombele wuxuu dareemay gurigiisa halka uu ku noolyahay Linas sidaas oo kale afar sano jir ah iyo horumarinta dhalinyaro xoog leh.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Waddada loogu talagalay sheekada
Mawqifkii ugu danbeeyay ee ugu dambeyntii ku guuleystay:
Kadib wadatashi badan oo lala yeeshay aabaha, hooyada, walaalaha iyo xubnaha qoyska, Ndombele mar kale ayaa go'aanka weyn ku gaaray in uu sii wado geedi socodkiisa horumarinta kubbadda cagta ee Guingamp, oo ah naadi sannado badan oo uu helay sumcadda horumarinta iyo hindisaha awooda dhalinyarada, Tusaale ahaan waa Didier Drogba.
Isku-biiritaanka Guingamp wuxuu ahaa isbedel dhamaystiran ee deegaanka Ndombele oo noqday qayb muhiim ah oo ka mid ah jiilka dahabiga ah.
Tanguy Ndombele Guingamp Story. Lacagta loo yaqaan "Over-Blog"
Ma ogeyd?… Tanguy Ndombele wuxuu ahaa labo sano ka yar inta badan ciyaartoydiisa iyo kuwa kasoo horjeeda Guingamp. Tani, si kastaba ha ahaatee, kama horjoogsaneynin inuu yahay midka ugu fiican inkastoo isbeddel buuxa oo jawi ah. Tababare Sullivan Martinet, tababaraha dhallinyarada ee Nasserele oo tababar la qaadanayay kooxda ayaa mar uun yiri wax ku saabsan:
"Ndombele wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu fiicnaa ee aan ku arkay sanadihii 9 ee Guingamp."
Tanguy Ndombele Road si ay u caan baxaan sheeko-Waalidiinta
Mid kale oo ka mid ah saaxiibadiisa hore, Malo Rolland ayaa sidoo kale xaqiijiyay erayadiisa;
"Awoodiisa, wuxuu ka horeeyay kuwa kale inkastoo uu ahaa kan ugu yar. Ndombele waxay arkeen xaglaha gudbiya oo kaliya oo uu arki karo. Sidoo kale, tayada ciriiriga ah ee kaliya ee uu ku faafay, waa mid culus. "
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Kusoo sharax sheekada
Qofka kubadda cagta leh dhadhanka aan weligiis dhicin ee guusha, waxa uu ahaa mid caadi ah isaga oo ku haya inuu helo cawska cagaaran. Guingamp ayaa loo ogolaaday Ndombele in uu u wareego kubada cagta heer sarre leh Amiens SC halkaasoo uu ku soo gabagabeeyay xirfadiisa ciyaareed.
Xagaagii 2014, Ndombele ayaa go'aansaday inuu ku riixo ka bixitaanka, waqtigan, si uu ugu biiro Lyon. Intii uu joogay kooxda, wuxuu noqday qeyb muhiim ah oo ka mid ah "The Lyon Revelation". Lyon, Ndombele iyo xoojinta awoodeeda ayaa ka dhigtay riyo si ay u difaacdo sida hoos ku aragtay.
Tanguy Ndombele ayaa ku soo boodaya sheekada sheekada. Ku darso 101 Yoolalka Weyn iyo Metro.
Waxa uu noqday qof leh awoodda N'Golo Kante, mid ka mid ah oo awooday inuu akhriyo ciyaarta oo uu sameeyo qalad ka dib markii wax laga qabanayay. Tanguy Ndombele ayaa kor u kacday heerarka sare ee tartanka oo ay ku dheehan tahay kooxo yurub ah. Wakhtiga qorista, wararka xanta ayaa waxaa ku jira isaga oo ku biiraya kooxo waa weyn oo Yurub ah.
Maxaad filaneysaa qof loo arko mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee kubada cagta adduunka? Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Nolosha Xiriirka
Iyada oo uu ku kici karo jahwareerka, su'aasha ku saabsan farriinta qof walba waxay noqon kartaa: ...Yaa Tanguy Ndombele ee saaxiibtiis ama WAG?
Iyada oo dhererka iyo muuqaalka quruxda leh, ma jirto wax diidaya xaqiiqda ah in Ndombele aysan ku jirin liiska rafiiqista ee haweenka.
Gabar saaxiib ah oo gabadh saaxiib ah - Xaqiiqooyin xiriirka
Waqtigan xaadirka ah, qoraallada qarsoodiga ah ee Ndombele waa mid ka soo baxa indha-indheynta indhaha dadku sababtoo ah noloshiisa jacaylku waa mid gaar ah oo laga yaabo inuu yahay riwaayad la'aan.
Xaqiiqdu waxay tahay, marxaladdan cusub ee noloshiisa xirfadeed, Ndombele waxa uu rabaa in aan wax laga fekerin oo go'aansaday inuu sii wado noloshiisa qarsoodi ah. Wuxuu jecel yahay inuu diirada saaro xirfaddiisa waxaana uu isku dayey in uu iska ilaaliyo waxkasta oo ku saabsan dhabta ah ee saaxiibkiisa ama xaaskiisa.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Naftaada Shaqsiga
Mawduuca Ndombele Nolosha Shakhsi ahaaneed
Helitaanka in la ogaado Nolosha Naftaada Tanguy Ndombele waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah. Bilaabidda, isagu waa qof noqon kara kuwo gaaban oo aad u daacad ah, anshax xumo iyo isfaham wanaagsan.
Ugu dambeyntii, Ndombele wuxuu leeyahay xaalad madaxbannaan oo nabad ah kaas oo u horseeday inuu horumar weyn ka sameeyo noloshiisa shaqsiyadeed iyo shaqadaba.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Xaqiiqooyinka LifeStyle
Gawaarida Gawaarida Dhulka
Sida at 3rd ee June 2019, Ndombele qiimo suuqa 65,00 Mill. €. Ciyaaryahan lagu qiimeeyo qadarkan waxaa hubaal ah inuu ku jiro qeybta mulkiilayaasha badankood.
Xaqiiqadani, si kastaba ha ahaatee, kama badna qaab nololeed qurux badan Ndombele awuxuu ku fiican yahay inuu maamulo kubada cagta. Marka laga reebo soo bandhigida adduunka oo dhan, ma jiraan wax badan oo laga ogaado xiddiga Faransiiska-Congolese.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Nolosha Qoyska
Sida horay loo sheegay, Tanguy Ndombele ee asalka qoyska ayaa la raadraacayaa Congo, Central Africa. Wax yar ayaa laga ogyahay waalidiintiisa 'marka laga reebo xaqiiqda ah inay ku nool yihiin nolol hooseeya iyagoo ku riyaaqaya faa'iidada wiilkooda. Sidoo kale, ma cadda haddii Ndombele uu leeyahay walaalo ama walaashiis.
Iyadoo la tixgelinayo xaalado ka hor dhalashadiisa, waxay u badan tahay in qoyska Tanguy Ndombele ay ka mid yihiin dad badan oo reer Congo ah oo u yimid Faransiiska oo leh sharciga magangelyo siyaasadeed intii lagu jiray 1990s. Intaanay u soo guurin Faransiiska, Faransiisku wuxuu ahaa luqadda rasmiga ah ee reer Ndombele.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Labada daafac ee Ndombele iyo Faransiiska Benjamin Mendy ka yimid isla guriga magaalada Longjumeau, Faransiiska.
Waxaa laga yaabaa in qeyb ka mid ah shaqsiyadiisa dhalinyarada ah, Tanguy Ndombele mar horeba loo fasaxay kooxo dhowr ah 'cayilan'. Tani waxay dhacdey inta lagu guda jiro sanooyinkiisa da'yarta.
Tanguy Ndombele Carruurnimada sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Soo koobista muuqaalka
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Tanguy Ndombele ee Caruurnimada iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Alexandre Lacazette Storyhood Plus Sheekooyinka Xogta Loo Yaqaano